Home Wararka Askar ka tirsan ciidamada dowladda Federaal oo Muqdisho lagu dilay
Dabley hubaysan ayaa xalay degmada Kaaraan ee Gobolka Banaadir ku dilay askar ka tirsan ciidamada dowladda Federaalka Soomaaliya. Goob-joogayaal ayaa sheegay in kooxda hubaysan ay degmada Kaaraan ku dileen laba askari oo ka tirsanaa Ciidamada Milatariga Soomaaliya.
Labada marxuum ayaa magacyadooda lagu sheegay Axmed-deey Gadaf iyo Sakariye Cali Aaden. Kooxdii dilka fulisay ayaa midkood goobta lagu toogtay halka intii kalena carartay sida wararku sheegayaan. Ururka Al-shabaab ayaa sheegtay mas’uuliyadda dilka loo gaystay labadaas marxuum eek a tirsanaa ciidamada dowladda.